China Octagon Carbon Fiber Tube for Multicopter abakhiqizi nabaphakeli |Feimoshi
20x30x500mm OctagonI-Carbon Fiber Tubeye-Multicopter
Sikhiqize ithubhu yethu eyingqayizivele ye-Octagon carbon fiber ye-drone.Kwenza uhlaka luzinze futhi lusebenze kahle.Isisindo esilula namandla aphezulu kuyinzuzo enkulu ye-copter.Ubukhulu bungaba ngu-1.0mm kanye no-1.5mm esitokweni.Senza usayizi we-20X30X500mm, 20X30X600mm no-20X30X1000mm esitokweni.Futhi ubude obuhlukahlukene bubuye bulungile kithi.
I-Surface Finish:Ecwebezelayo futhi Matte
Isicelo:Izindiza, amamodeli, ukuguqulwa kwemoto kanye nokucubungula izingxenye zomshini wensimbi.
Usayizi oyinhloko kanye nokucaciswa:Imininingwane Yefayibha: 1K, 3K
Isitayela Sokweluka: Ilula.I-Twill
Uhlobo lweFiber:I-Carbon fibre+carbon fiber, Carbon fibre+ glass fiber, Carbon fibre+aramid fiber
Ubukhulu: Ukujiya okuqondile kungahlangatshezwana nezidingo zekhasimende)
Ukucaciswa kokusetshenziswa okuvamile
kungaba ngokwezifiso njengoba ikhasimende ngalinye lidinga
1. Isampula&I-oda Elincane?
Siyakwamukela ku-oda lesampula ukuze uhlole futhi uhlole ikhwalithi.Amasampuli ahlanganisiwe ayamukeleka.
Ngokusho kwesikhathi sokukhiqiza impendulo yevolumu.Ungalokothi ukhohlise amakhasimende!
I-Accpet i-oda elincane&Service izokunikeza izeluleko ngokuya ngesimo semininingwane.
4. Ukuthumela Izimpahla
Ngokuvamile sithumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx noma i-TNT.Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingu-3-5 ukufika.
Ayikho inkinga kithi, futhi sizohlinzeka ngokusekelwa kwezobuchwepheshe!Impendulo Ilungile
Ufuna i-20x30x500mm ekahle ye-Octagon Fiber Tube Manufacturer & nomphakeli?
Sinokukhetha okubanzi ngezintengo ezinhle ukukusiza ukuthi udale.Yonke i-3k OctagonI-Carbon Fiber Tubesaqinisekisiwe ikhwalithi.Siyi-China Origin Factory ye-Carbon Fiber Tube ye-Multicopter.Uma unombuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
I-Carbon fiber Drone tube
3k mat finish 25mm, 10mm, 16mm carbon fibre tube...
Kwenziwe ngokwezifiso i-100% twill matte/glossy carbon fiber...
3k twill nokwelukiweyo surface ukukhanya isisindo ecwebezelayo carb ...